मधुमेहीमा मुटुरोगको भय- विविधा - कान्तिपुर समाचार
मधुमेहीमा मुटुरोगको भय
कार्तिक २१, २०७५ डा. अंशुमाली जोशी
काठमाडौँ — अहिले विश्वमा संक्रमणरहित रोगहरू जस्तै– मुुटुरोग, मधुमेह, मोटोपना, क्यान्सर, रक्तचाप आदि दिनैपिच्छे बढ्दै गइरहेको छ । यी रोगहरूबाट प्रत्येक वर्ष मृत्युदर बढ्दै गएका कारण सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
मुटुरोग लाग्न नदिन खानपिनमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने, तौल घटाउनुपर्ने, नियमित व्यायाम गर्नुपर्ने, तनाव धेरै नलिने र धूमपान बन्द गरेर जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुटुरोग लाग्ने विभिन्न कारणमध्ये मधुमेह रोग प्रमुख कारण मानिन्छ । करिब ६८ प्रतिशत मधुमेहका बिरामीहरूको मृत्यु मुटुरोगका कारणले गर्दा हुने गर्छ । मधुमेहका बिरामीहरूलाई हृदयाघात हुने सम्भावना २ देखि ४ गुणा बढी हुने गर्छ ।
यो सम्भावना महिला र धूमपान गर्ने मानिसमा झन् बढी हुने गर्छ । अहिले जीवनशैलीको परिवर्तनले गर्दा युवा अवस्थामा मधुमेह धेरै देखिन थालेको छ । युवा अवस्थामा देखिएको मधुमेहमा मुटुरोगको सम्भावना अत्यधिक हुने गरेको छ । हाम्रो अनुसन्धानले नेपालमा मधुमेह भएका बिरामीहरूमा ४४ प्रतिशतमा उच्च रक्तचाप, ४१ प्रतिशतमा उच्च कोलेस्ट्रोल, ६६ प्रतिशतमा मोटोपन र ७.५ प्रतिशतले धूमपान गर्ने देखिएको छ । मधुमेह रोग सुरु हुने औसत उमेर ४८ वर्ष देखिएको छ ।
मधुमेहले मुटुलाई विभिन्न तरिकाले असर गर्छ । मधुमेह नियन्त्रण नराखेमा रगतमा चिनीको मात्रा बढ्छ । यसले गर्दा कोलेस्ट्रोल बढेर रगत बग्ने नलीका भित्तामा कोलेस्ट्रोल जम्छ र विस्तारै यो जमेको कोलेस्ट्रोल बढेर रगत बग्ने नलीका भित्ता साँघुरो बनाइदिन्छ र नसामा अवरोध उत्पन्न भई हृदयाघात हुने गर्छ । यो समस्या मोटोपना, धूमपान, उच्च रक्तचाप, अस्तव्यस्त जीवनशैली एवं तनावले झनै बढाइदिन्छ । मधुमेहका बिरामीहरूलाई हृदयाघातको लक्षण जस्तै– छाती दुख्ने वा श्वास फेर्न गाह्रो हुनेजस्ता लक्षण नहुन पनि सक्छ । त्यसकारण मधुमेहका बिरामीहरूलाई हृदयाघात हुनु झन् बढी खतरनाक मानिन्छ र तुरुन्तै ज्यान जान सक्छ । मधुमेहका कारण मुटु सुन्निने र मुटुले राम्रोसँग काम नगर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।
मधुमेहका बिरामीहरूले मुटुरोग लाग्न नदिन शरीरमा चिनीको मात्रा (सुगर) लाई नियन्त्रण राख्नु जरुरी छ । तीन महिनादेखिको औसत सुगर देखाउने रगतको जाँच एच.बी.ए.वान.सी ९ लाई ७ प्रतिशत भन्दा तल राख्नुपर्छ । त्यस्तै रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्ने औषधिहरूको नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा मुटुरोग लाग्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ । मधुमेहमा रक्तचाप १३०/८० मुनि राखेमा मुटुरोगको जोखिम कम हुन्छ । त्यस्तै रगतमा विभिन्न किसिमका कोलेस्ट्रोलमध्ये एल.डी.एल. कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लिसराइडलाई खतरनाक कोलेस्ट्रोल मानिन्छ ।
मधुमेहमा एल.डी.एल. कोलेस्ट्रोल १०० एमजी/डिएल भन्दा मुनि राख्नुपर्छ र मुटुरोगको उच्च जोखिम भएकालाई ७० भन्दा तल राख्नुपर्छ । त्यस्तै ट्राइग्लिसराइडलाई १५० एमजीडिएल भन्दा मुनि राख्नुपर्छ । मुटुरोगको धेरै सम्भावना भएको मधुमेहका बिरामीहरूलाई रगत पातलो बनाउने औषधि एस्पिरिनको पनि आवश्यकता पर्छ । आजकाल मधुमेहका केही नयाँ औषधिले समेत हृदयाघातबाट बचाउने र मृत्युको सम्भावना कम गरेको केही नयाँ अनुसन्धानले देखाएको छ ।
इम्पाग्लिफ्लोजिन (जार्डियन्स) को प्रयोगले मुटुरोगको कारणले मृत्यु हुने सम्भावना ३२ प्रतिशतले कम गरेको देखियो । त्यस्तै मधुमेहको अरु नयाँ औषधिहरू लिराग्लुटाइड (भिक्टोजा) रक्यानाग्लिफ्लोजिनको प्रयोगले मुटुरोगको सम्भावनालाई कम गरी मृत्युदर घटाएको देखियो ।
मधुमेहमा कहिलेकाहीं सुगर चाहिनेभन्दा कम भएर पनि मुटुलाई नराम्रो असर पार्न सक्छ र मृत्युदरलाई बढाउन सक्छ । केही मधुमेहका औषधिहरू सुगरलाई चाहिनेभन्दा बढी कम गर्न सक्छ । मधुमेहलाई चाहिनेभन्दा बढी नियन्त्रण गर्न खोजेमा मृत्यु हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण मधुमेहको सन्तुलित नियन्त्रण गरेमा मृत्युदर घट्ने अनुसन्धानले देखाएको छ ।
मधुमेहमा मुटुरोगको शंका लागेमा गरिने जाँचहरू ई.सी.जी, इको, स्ट्ेरस इको र ट्ेरडमिल परीक्षण हुन् । यी परीक्षण पोजेटिभ देखिएमा मुटुको धमनीहरू हेर्नका लागि कोरोनरी एन्जियोग्राम गर्नुपर्छ । कोरोनरी एन्जियोग्राममा धमनीहरूमा कति मात्रामा अवरोध छन्, त्यही अनुसारको उपचार पद्धति गर्नुपर्ने हुन्छ । धमनीमा अवरोध धेरै भएमा एन्जियोप्लाष्टी वा बाइपास सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यी उपचार तुलनात्मक रूपमा अलि महँगा हुनाले मधुमेहीहरू मुटुरोग लाग्नै नदिन सचेत हुनुपर्छ ।
मधुमेहका बिरामीहरूमा मुटुरोगको भय र मृत्युदर धेरै हुने हुनाले त्यसबाट बच्ने उपाय अपनाउनु जरुरी छ । खानपान र जीवनशैलीमा परिवर्तन गरी मधुमेह, रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल र मोटोपनालाई नियन्त्रणमा राखेर, तनावबाट मुक्त भएर, धूमपान त्यागेर र मुटु बचाउने औषधिको प्रयोगबाट त्यो सम्भव हुन्छ । मधुमेह र मुटुरोग सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रममार्फत आम जनतालाई यसप्रति सजक र सचेत रहन सरकारी र निजी क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ । त्यस्तै प्रत्येक घरपरिवारका सदस्यहरूबीच स्वास्थ्य र खानपानका विषयमा कुराकानी हुनु आवश्यक छ । उपचारभन्दा रोकथाम नै बढी प्रभावकारी, सजिलो र किफायती हुन्छ ।
लेखक इन्डोक्राइनोलोजिष्ट हुन् ।
प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७५ ०९:००
‘केही नगर्ने’ विकल्पमा बहस
परियोजना बनेपछि ३० वर्षमा यसो होला भन्नेमात्र होइन, त्यो परियोजना नबने ३० वर्षमा कसो होला भन्नेतिर चेत पुर्‍याउनुपर्छ ।
कार्तिक २१, २०७५ नवराज खतिवडा, विष्णुप्रसाद गौतम
काठमाडौँ — पूर्वाधार विकासका परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिन्छ । प्रभाव मूल्यांकन गर्ने प्रक्रियाका रूपमा परियोजना निर्माणका सम्भावित विकल्पहरू विश्लेषण गरी तुलना गरिन्छ ।
संघीय राजधानी लक्षित नागढुङ्गा–धुलिखेल मेट्रोको सम्भाव्यता अध्ययनको विषयलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यो मेट्रोलाई कुन मार्ग भएर लैजाने भन्ने विषयमा केही विकल्प आउन सक्छन् । पहिलो, कालिमाटी–बानेश्वर–कोटेश्वर हुँदै जाने । दोस्रो, कालिमाटीबाट काठमाडौं दरबार स्क्वायर, दरबार मार्ग, पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर र त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै कोटेश्वर भएर जाने ।
कुनै प्राज्ञिक छलफल वा विश्लेषण नगरिकनै जोकोहीले अनुमान गर्न सक्छ, दोस्रो विकल्पमा आधारित परियोजनाले यात्रा गरिने बढी गन्तव्य जोड्न सक्छ । तर सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव र तिनको निराकरणका हिसाबले यो धेरै महँगो परियोजना हुन जान्छ । यस्तै मेट्रो सतहमा निर्माण गर्ने कि आकाशे पुल बनाएर त्यसमाथि रेलमार्ग विछ्याउने कि भूमिगत बनाउने भन्ने विकल्प पनि विश्लेषण गरिन्छ । भूमिगत मेट्रोको सामाजिक वा वातावरणीय प्रभाव सबैभन्दा न्युन हुन्छ । तर सबैभन्दा महँगो हुन्छ । यस्तो अध्ययन गर्दा आर्थिक पक्षलाई निरपेक्ष बनाई वातावरण र सामाजिक दायरामा मात्र केन्द्रित हुनु जरुरी हुन्छ ।
वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्दा प्रभाव आँकलनका लागि ‘केही नगर्ने’ विकल्पलाई आधार बनाइन्छ । सिद्धान्तत: प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्दा समाज या वातावरणमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पर्दैन । त्यसमा कुनै बहसमा समेटिएको विकल्पले कति प्रतिकूल प्रभाव पार्छ र त्यसले कति जोखिम सिर्जना गर्छ, अनि त्यो जोखिमलाई निस्प्रभावी बनाउन कति लागतका निराकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विषय अध्ययन गर्ने गरिन्छ । यसै विषयका आधारमा उत्तम विकल्प छनोट गरिन्छ । ‘केही नगर्ने’ विकल्पबारे अध्ययन गर्नु भनेको कुनै परियोजनाले कति लाभ दिन्छ भन्ने आँकलन गर्नु पनि हो । ढलमतीका रूप लिएर बगिरहेको वाग्मती नदीलाई पुनर्जीवित गर्ने दिशामा ‘केही नगर्ने’ विकल्पको औचित्य छैन ।
समाज गतिशील छ र संसार परिवर्तनशील छ । त्यसैले ‘केही नगर्ने’ विकल्पले यथास्थितिको परिवेशलाई स्थिर भन्ठान्नु अपर्याप्त छ । स्वीकृति पाएका अधिकांश ईआईए प्रतिवेदनले ‘केही नगर्ने’ विकल्पलाई चाहिनेभन्दा सतही विश्लेषण गरेको पाइएको छ ।
हाम्रो देशमा भइरहेका सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका धेरैजसो अध्ययनमा परियोजना प्रस्ताव सम्बन्धी विकल्पको ठोस विश्लेषण नभएको प्रतीत हुन्छ । चर्चामा रहेको निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदनमा प्रस्तावित योजना स्थलका विकल्पको विवरण सार्वजनिक भएको देखिँदैन । प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरण अर्कै भूगोलको कुनै जलविद्युत आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदनबाट हुबहु सारिएको भनिएको छ ।
दोहोरो अङ्कको आर्थिक विकासको सपना बोकेर भौतिक पूर्वाधार द्रुत निर्माणका लागि कम्मर कसेका बेला यस्ता कमजोरीबाट निराश हुने र विगतका गल्ती–कमजोरीलाई सुधार नगर्ने छुट हामीलाई छैन । कसैलाई लाञ्छना लगाउनेभन्दा पनि गल्ती–कमजोरीबाट सिक्दै जाने हो । राज्यकोष दोहन गरी ईआईए लगायतका प्रतिवेदनमा कर्मकाण्डीय पाराले झारा टार्ने परामर्शदाता र संस्थालाई कानुन बमोजिम दण्ड–सजाय गर्ने संस्कार थालनी गर्नु आवश्यक छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०५४ मा परियोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुको मर्म उल्लेख छ । नामले ‘संरक्षण’ शब्द बोके पनि ‘वातावरण संरक्षण’ गर्नु वा ‘विद्यमान प्राकृतिक अवस्था’लाई यथास्थितिमा राख्नु यसको उद्देश्य होइन । भौतिक पूर्वाधार निर्माण नभई द्रुत आर्थिक विकास हुन सक्दैन । अधिकांश पूर्वाधार निर्माण गर्दा समाज या वातावरणमा केही न केही प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । जमिन खनजोत नगरी, रुख नकाटी वा घरबस्ती विस्थापित नगरी कुनै पूर्वाधार बन्दैन ।
केही सन्दर्भ लिऊँ । नेपालमा वन विनाशको कुरा यति ठूलो गरी उठाइयो कि रूख काट्नु अपराध हो, जसरी संस्कार बस्यो । भूकम्प पीडितले घर बनाउन आफ्नै बारीको रुख काट्न नपाउने व्यवस्था स्थापित भयो । घरको खाँबो जसरी पनि उठाउनैछ । अनि विदेशबाट आयातीत (स्वदेशी भए पनि विदेशी कच्चा पदार्थवाला) फलामका पोल र दलिन डाँडाकाँडा पुगे । सामाजिक र वातावरणीय प्रभावबारे बहस–पैरवी गर्ने अध्येता वा पेसाकर्मीले यस्ता विषयबारे सोच्नैपर्छ ।
यसैले प्रहरी लगायत कानुन हातमा लिएका अन्य निकायले यसलाई कमाइखाने भाँडो बनाएका आरोप सुनिन्छ । स्थानीय तहले ढाट तेस्र्याएर ढुवानीकर्तासँग रकम असुल्ने गरेको कुरा सतहमा आएको छ । अर्कोतिर रूख भने धोद्रो हुँदै र कुहिँदै गएका छन् । जसरी गाउँघरमा युवाको अभाव र वृद्धवृद्धाको बाहुल्य छ, वनमा पनि वृद्ध रूखको बाहुल्य छ, युवा रूखको अभाव छ ।
हामीले पर्यावरण जोगाउन भन्दै रूख काट्न त रोक्यौं, तर फर्निचरको भोक रोक्न सकेनौँ । यो भोक दिनहुँ बढ्दो छ । यहाँ काटिनु सट्टा क्यानाडामा रूख काटियो । केही नभए पनि अर्को २–३ रुख बालेजति इन्धन खर्चेर त्यसलाई नेपाल ल्यायौं । यस्ता कुरामा गम्भीर बहस, पढाइ, अनुसन्धान तथा नीतिगत सुधार जरुरी छ । कुन देशमा गएर के पढियो भन्ने ज्ञानको मात्र चर्चा गर्नुभन्दा पनि हाम्रो परिवेशलाई के उपयुक्त हो भन्ने विवेक खाँचो छ ।
मान्छे पनि ती जनावरजस्तै हो । तिनीहरूभन्दा धेरै ज्याद्रो पनि । रोजीरोटी र क्रीडास्थल पर्याप्त व्यवस्था गरेनौं भने उसले के प्रकृतिमाथि जथाभावी अतिक्रमण गर्दैन ? तराईतिरबाट प्रजनन गर्न पहाडतिर माछा जानुपर्ने र उसको प्राकृतिक मार्गमा व्यवधान ल्याइदिन नहुने भनेर संवेदनशील हुन जान्नेले मान्छेमा समयक्रमसितै के–के सभ्य र सामाजिक आकांक्षा आउलान् भन्ने परिकल्पना गर्न सक्नैपर्छ । परियोजना नबन्दाको ‘केही नगर्ने’ विकल्प विश्लेषण हामीले यथास्थितिलाई सम्झेर मात्रै गर्ने परिपाटी बढी छ, जुन अपर्याप्त छ । परियोजना बनेपछि ३० वर्षमा यसो होला भन्नेमात्र होइन, त्यो परियोजना नबने ३० वर्षमा कसो होला भन्नेतिर चेत पुर्‍याउन अलि कमी भएको छ ।
सडक बनाउने सन्दर्भमा ‘केही नगर्ने’ विकल्प अहिले जस्तो वातावरण छ, त्यस्तै रहन्छ भन्ठानियो भने भुल हुन्छ । वातावरणको कारण देखाई सडक बनाउन रोकिएछ भने कतै स्थानीयले बिना डिजाइन मनलागी बाटा खोल्ने हुन् कि ? सायद मूलधारको विकास परियोजना यो वा त्यो बहानामा ढिला भएपछि हचुवामा विकास गर्ने परिपाटीले ठूलो वातावरण विनाश पो निम्त्यायो कि ?
मानौं, एउटा विमानस्थल बन्ने कुरा छ र त्यो बनेन भने परिवेश अहिले जस्तो छ, त्यस्तै रहन्छ भन्ने सोच्नु कमजोरी हो । मान्छेको हवाई यात्रा गर्ने चाहना र आवश्यकता वृद्धि हुने निश्चित छ । यस्तोमा मान्छेले विकल्प खोजी गर्छ । ती विकल्प अर्को विमानस्थलको विकासमात्रै नभएर बसाइँ–सराइ, अर्को विमानास्थल हुँदै जाने, त्यहाँ बाटो लानेदेखि कल्पना गर्न गाह्रा कुरा पनि हुन सक्छन् । ‘केही नगर्ने’ विकल्पबारे गहन मनन गर्ने हो भने थुप्रै नयाँ कुरा आउन सक्छन्, जुन यथास्थितिलाई ‘केही नगर्ने’ विकल्पको आधारका रूपमा लिँदा आएका हुँदैनन् ।
‘केही नगर्ने’ विकल्प वातावरण र सामाजिक परिवेश यथास्थितिमै रहने भन्ठान्ने मानसिकताभन्दा धेरै बृहत्तर ढंगले सोचिनुपर्छ । हुनसक्छ, परियोजना ‘क’ बन्दा हामीले त्यसका आयाम र मूलभूत विषयको आधार लिएर चर्चा गरेजस्तै (जस्तो– परियोजनाले ५० हजार घनमिटर माटो खन्छ) परियोजना नबनाउने विकल्प चर्चा गर्दा पनि भविष्यमा के हुनसक्छ त भन्ने आँकलन (जस्तो– नबन्दा ६० हजार घनमिटर माटो खनिने सम्भावना देखिन्छ) समेत गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।
अहिले कुनै न कुनै रूपमा अवैज्ञानिक तरिकाले संघीय राजधानी लगायत कैयौं सहर वरपरका पहाडबाट हचुवामा निर्माण सामग्री उत्खनन भइरहेकै छन् । यसबाट एकातिर सर्वमान्य सिद्धान्तको आधारमा राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्व आएको छैन भने अर्कोतिर अनियोजित उत्खननले के दुर्घटना निम्त्याउने हो, कसैलाई जानकारी छैन ।
पेसाकर्मी र विज्ञसँग सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञानमात्र होइन, विवेकसमेत हुन्छ । यस्ता कुरालाई के कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विवेक लगाएर काम गर्नेतर्फ ध्यान दिन अत्यावश्यक छ । अनि मात्र सर्वसाधारणले पस्कने टिप्पणी र विज्ञहरूले राख्ने तर्कमा भिन्नता देखिन थाल्छ ।
गौतम प्रदेश ५ का योजना आयोग सदस्य हुन्, खतिवडा नेपाल विकास प्रतिष्ठानसँग आबद्ध छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७५ ०८:५६